We Fight We Win. -- " More than Media ": ကမ္ဘာ့ကျော် မြန်မာဘတ်စကတ်ဘော် သမား အယ်မလီတေ ဘ၀ရုပ်ရှင်
ကမ္ဘာ့ကျော် မြန်မာဘတ်စကတ်ဘော် သမား အယ်မလီတေ ဘ၀ရုပ်ရှင်
ဒါကျတော့ တရုတ်မ အယ်မလီတေလို့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ပါလာ ကိုမိုးသီးရဲ့
တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းရင်းသားထဲပါလို့လား။ သွားပြီး အလွမ်းသင့်မနေစမ်းပါနဲ့ မောင်မိုးသီးရာ။ တရုတ်မအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်တာ တရုတ်တွေ အားပေးကြပါလိမ့်မယ်။
ma lwan lout par buu
Doesn't matter whether she was Chinese descesnt she still has Burmese blood. Did you see that thieve like Tay Za? his son waste the money on prostitute. Is he chinese descent? His father isathieve stealing Burma resources and make him rich and Burma countless like Tayza. Because the world change Burma has to chang there will be less pure descent and Burmese people has to learn to adapt that , do not like Karen, Kalar Ta yute , Bamar that old thought. Move on Burmese people otherwise you guy will stuck in the mud like donkey in the mud.